I-Vivo X21s: amanqaku, iinkcukacha kunye nexabiso | I-Androidsis
Ukusukela oko kwasungulwa Vivo X21, eyenzeka phakathi ku-Matshi, inkampani ikhuphe imodeli entsha yale, eza kuthi ifike yenze i-trident kunye elandelayo X21i, kwaye akukho namnye ngaphandle kwakhe Ndihlala kwiX21s.
Esi siphelo sibhengezwe e-China. Ngokucacileyo, Umahluko omtsha wekhompyuter yeVivo X21 esele ikhankanyiwe. I-Vivo X21s ixhotyiswe yi-Snapdragon 660 kwaye inomboniso wenotshi wamanzi, nangona incinci ngobukhulu. Njengefowuni yeX21, iiX21s zikwabonisa umfundi obonisa ngeminwe.
Ifowuni yeVivo X21s ineglasi ye-3D ebuyayo, Imilinganiselo ye-157.1 x 75.08 x 7.9 mm kwaye inobunzima be-156 gram. Ixhotywe ngescreen se-6.41-intshi ye-Super AMOLED yesikrini evelisa isisombululo se-FullHD + se-2.340 x 1.080 pixels (19.5: 9). Ukongeza, ixhotyiswe nge- Isikena sesine sokukrolwa kweminwe kwaye inekhamera ye-IR (infrared) ekhaba kuyo ukuxhasa ukubonwa kobuso ebumnyameni.
Ngakolunye uhlangothi, I-chipset ye-Snapdragon 660 AIE iyinika amandla kunye ne-6GB ye-RAM. Kwelinye icala, inesigcini esakhelweyo esine-128 GB, esinokuyandisa ngekhadi le-MicroSD.
Ujongano lomsebenzisi IFunTouch 4.5 inyuselwe kwinkqubo yokusebenza ye-Android 8.1 Oreo, Esisixhobo esifakelwe kwangaphambili kunye naso. Itekhnoloji yeVivo ye-Dual-Turbo ekhawulezisa ukusebenza kwe-CPU kunye ne-GPU ngelixa idlala imidlalo ikwakhona kwifowuni. Ezinye izinto zibandakanya umncedisi weJovi AI kunye nemowudi yomdlalo. Ihlala isebenza ngenxa yebhetri engama-3,400 mAh exhasa ukutshaja kwemoto ezimbini.
Ngokubhekisele kwicandelo lokufota, icala elingaphambili le-Vivo X21s lixhotyiswe ngekhamera ye-selfie ye-24.8 megapixel ene-f / 2.0 ukuvula. Umva wefowuni ubonakalisa ukuseta ikhamera emileyo ethe nkqo equka inzwa ephambili ye-12-megapixel ene-f / 1.8 aperture edityaniswa nenzwa yesibini ye-5-megapixel kunye f / 2.4 ukuvula. Iikhamera zangasemva ezimbini zixhotyiswe ngezinto ezinje nge-teknoloji yobuhle ye-AI, ukuqondwa kwemeko ye-AI, kunye nemowudi ye-AI yemifanekiso. Ikhamera engaphambili ixhasa iziphumo zokukhanya kwesitudiyo ukubamba iifoto ezimangalisayo.
Iimpawu zonxibelelwano zeVivo X21 kubandakanya inkxaso ye-4G LTEI-Wi-Fi 802.11 b / g / n, i-Bluetooth 5.0, i-GPS, i-microUSB 2.0 kunye ne-3.5 mm audio jack.
Amaxabiso kunye nokufumaneka kweVivo X21s
IiVivo X21s zinemibala emibini yegradient eyahlukileyo: Ubusuku obuNtsundu obuMnyama kunye neMillennium Pink. Iselfowuni inexabiso lentengo le-2,498 yuan (~ 316 euros ngexabiso lotshintshiselwano) e-China. Akukho lwazi lufumanekayo ngomhla wokumiliselwa kwe-smartphone kweli lizwe, ubuncinci malunga nokuba izakuwela imida yayo iye eYurophu nakwilizwe liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Vivo X21s, ifowuni entsha ene-Snapdragon 660 kunye ne-in-screen yokufunda iminwe